Zvinhu 3 Zvisingakwanisi Kutengwa Nemari
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
VANHU pavanoona kuti basa ringangopera, vangangorasikirwa neimba kana nemari yepenjeni, vakawanda vacho havaregi kutenga chose chinenge chavatora mwoyo. Zvinhu izvi zvingaita sezvinoshamisa asi ndizvo zvinoitika.
Vanhu vakadaro vari nyore kuwira kuvanhu vanoshambadzira zvinhu avo vanotaura kuti tinotofanira kuva neimba yakakura, motokari yekwamberi, kana kuti hembe dziri mufashoni. Hauna mari here? Usanetseka, tenga nechikwereti! Chinenge chichidiwa nevanhu vakawanda kuzviita vanhu vemari kunyange zvichizovanyudza muzvikwereti.
Asi hazvizombotori nguva refu chokwadi chisati chabuda pachena. “Kutenga zvinhu nechikwereti uchida kushamisira kwakafanana nokusvuta dhiragi rinonzi cocaine kuti pfungwa dzigadzikane,” rinodaro bhuku rinonzi The Narcissism Epidemic. “Kuchipa zvinenge zvakachipa uye zvinogona kukushandira asi kwenguva pfupi chete. Nokufamba kwenguva unosara usisina kana nesendi muhomwe uye zvinokuita kuti uzova nechirwere chekunyanya kusuwa (depression).”
Bhaibheri rinoratidza kuti ufuza “kushamisira nezvinhu zvoupenyu zvomunhu.” (1 Johani 2:16) Kuda zvinhu zviri munyika kunoita kuti titadze kuona zvinhu zvinonyanya kukosha muupenyu izvo zvisingakwanisi kutengwa nemari. Ona zvinhu zvacho zvitatu.
1. MHURI YAKABATANA
Brianne, * musikana ari kuyaruka wokuUnited States, anoti baba vake vanonyanya kukoshesa basa ravo uye kutenga-tenga zvinhu. Anowedzera kuti: “Hatina chatinoshayiwa, asi baba hauvaoni kumba vanongogara vari parwendo. Ndinozviziva kuti basa ravo ndizvo zvariri asi ndinofunga kuti vanofanira kuwanirawo mhuri yavo nguva!”
Zvokufunga nezvazvo: Nokufamba kwenguva baba vaBrianne vachazodemba chii? Ukama hwavo nemwanasikana wavo huri kukanganisika papi nemhaka yokunyanya kuda zvinhu zvenyika? Mhuri yavo inonyanya kuda chii kudarika mari?
Zvinotaurwa neBhaibheri zvokufunga nezvazvo:
‘Kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvose; vamwe vakati vachiida zvikuru, vakazvibaya neshungu zhinji.’—1 Timoti 6:10, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona.
‘Zviri nani kudya muriwo paine rudo, pane kudya mhuru yakakodzwa paine ruvengo.’—Zvirevo 15:17, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.
Chinonyanya kukosha: Mhuri yakabatana haikwanisi kutengwa nemari. Chinongodiwa chete kuva nenguva nemhuri yako uye kuipa rudo rwakakodzera.—VaKorose 3:18-21.
2. RAMANGWANA RAKACHENGETEKA
“Amai vangu vanogara vachinditi ndinofanira kuroorwa nomurume ane mari yakawanda uye ndinofanira kudzidza kuti ndigowana basa rine mari kuitira kuti ndizokwanisa kurarama kana pasisina mari yomurume,” anodaro musikana ane makore 17 anonzi Sarah. “Zvinoratidza kuti chinhu chinenge chiri mupfungwa dzavo ndechokuti vangaramba sei vaine mari.”
Zvokufunga nezvazvo: Zvinhu zvipi zvine musoro zvaunofunga paunenge uchifunga nezveramangwana? Zvinhu zvaunenge uchifunga nezvazvo zvinozonzi hazvina musoro kana wava kuita sei? Zvii zvingaitwa namai vaSarah kuti vabatsire mwana wavo kuti aone mari zviri pakati nepakati?
“Regai kuzviunganidzira pfuma panyika, pane chitemamachira nengura zvinodya, uye pane mbavha dzinopaza dzoba.”—Mateu 6:19.
‘Hamuzivi zvichange zvakaita upenyu hwenyu mangwana.’—Jakobho 4:14.
Chinonyanya kukosha: Kuita makomo nemakomo emari hakusi iko kunoita kuti uve neramangwana rakachengeteka. Mari inogona kubiwa uye haikwanisi kubvisa urwere kana kuita kuti usafa. (Muparidzi 7:12) Bhaibheri rinodzidzisa kuti ramangwana rakachengeteka unogona kuriwana kana ukaziva Mwari nezvaanoda.—Johani 17:3.
“Vabereki vangu vakandidzidzisa kurarama upenyu husina tunhu twakawanda-wanda,” anodaro musikana ane makore 24 anonzi Tanya. “Ini nasisi vangu takakura tichifara kunyange zvazvo taingova nezvinhu zvishoma zvokurarama nazvo.”
Zvokufunga nezvazvo: Sei zvisiri nyore kuti munhu agutsikane nokungova nezvinhu zvishoma zvinokosha pakuita kuti munhu ararame? Panyaya yemaonero aunoita mari uri kudzidzisa mhuri yako kuti kudii?
“Kana tiine zvokudya nezvokupfeka nepokugara, tichagutsikana nezvinhu izvi.”—1 Timoti 6:8.
“Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.”—Mateu 5:3.
Chinonyanya kukosha: Pane zvinokosha chaizvo kudarika mari uye zvinhu. Bhaibheri rinototi: “Kunyange kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.” (Ruka 12:15) Kutaura chokwadi, chinoita kuti munhu agutsikane muupenyu kuziva mhinduro dzemibvunzo yakaita seiyi:
Ramangwana rakamira sei?
Ndingaziva sei zvinodiwa naMwari?
Zvapupu zvaJehovha zvinobudisa magazini ino zvichafara chaizvo kukubatsira kuti uwane mhinduro dzemibvunzo iyi.
^ ndima 8 Mazita ari munyaya ino akachinjwa.
Chii Chinoita Kuti Ufare?
Bhuku rinonzi The Narcissism Epidemic rinoti, “Vanhu vakati wandei vanoda zvinhu zvakawanda havafari uye vanobatwa nechirwere chekunyanya kusuwa. Kunyange vanhu vane chishuvo chokuda kuita mari yakawanda vanopedzisira varwara nezvirwere zvepfungwa, maronda epahuro, kurwara nemusana, musoro uye vanopedzisira vava kudhakwa uye kushandisa madhiragi zvisina kufanira. Shungu dzokuda kupfuma dzinoita kuti vanhu vasafara.”
“Mumakore okuma1960 uye nechokutanga kwema1970, vana vokukoreji pavaibvunzwa zvikonzero zvokuenda kukoreji vazhinji vacho vaiti ‘vanoda kuzova vanhu vakadzidza.’ Vashoma ndivo vaitaura nezvokuti ‘vanoda kuzoita mari yakawanda.’ Kubvira kuma1990, vakawanda vakanga vava kuti ‘kuita mari yakawanda’ ndicho chikonzero chikuru chokuenda kukoreji . . . Nemhaka yokuchinja mafungiro kuri kuita vana vokukoreji, pari kuwedzerawo matambudziko akadai sekusuwa zvakanyanya, kuzviuraya nemamwe matambudziko anokonzerwa nokushungurudzika mupfungwa.”—The Price of Privilege, rakanyorwa naDr. Madeline Levine.
“Kutenga Zvinhu Kunounza Mufaro”
Dr. Madeline Levine vakati, mhuri, hama neshamwari, uye machechi zviri kutadza kuita kuti vanhu vafare asi chiri kukwanisa kuunza mufaro kutenga-tenga zvinhu. Mubhuku rinonzi The Price of Privilege vanoti, “kutenga zvinhu ndeimwe nzira yokuchinja nyika yedu. Mari inoita kuti titenge zvinhu uye kuti munhu ari kutenga anzwe kuti munhuwo pane vamwe. Asi mafungiro iwayo ndeekuzvinyengera . . . Makambani makuru uye vanoshambadzira vanobhadharwa kuti vaite kuti vanhu vafunge kuti kutenga zvinhu ndiko kunoita kuti munhu unzi uri munhu pane vamwe.”